Cryptotrading: Falanqeyn Farsamo Si Loo Goaansado Qodobada Furitaanka Ee Kala Xulashada. | vfxAlert official blog
Cryptotrading: meelaha laga soo galo falanqaynta farsamada
Suuqa cryptocurrency ayaa sii kordhaya: Bitcoin waxay sii wadaa inay cusbooneysiiso sicirka sicirka waxaana jira shuruudo looga baahan yahay sii socoshada isbeddelka foosha xun ee 2021. Xitaa naadiyada kubada cagta waxay leeyihiin qadaadiic dijitaal ah. Falanqaynta farsamada ayaa ah ikhtiyaar weyn sida lacagta loogu sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah - aan ku bilowno raadinta dhibco gelitaan lagu kalsoonaan karo.
Aynu qeexno shuruudaha. Istaraatiijiyadda ikhtiyaariga ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, "barta laga soo galo" macnaheedu maaha qiimaha saxda ah ee hantida, marka la gaaro midka furi kara heshiis cusub ama xiri kara heshiiska hadda jira. Waxaan ula jeedaa aag 5-7 dhibcood ka sarreeya / ka hooseeya qiimaha la xisaabiyey , way ka sii ballaadhnaan kartaa marka isbeddelku sii kordho ama ka yaraado suuqa dhinacyadiisa.
Mid kasta oo ka mid ah hababka soo socda ee lagu helayo meelaha laga soo galo ayaa leh astaamo u qalma oo u qalma maqaal weyn oo gaar ah. Ma geli doonno sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida loo adeegsado farsamooyinka, u akhri baloogga , laakiin halkan waxaa kaliya loogu hagayaa fikradahaaga gaarka ah ee ku saleysan tilmaamayaasha caadiga ah ee ka jira dhammaan boosteejooyinka ganacsiga.
1. Khadadka isbeddelka .
Habka "qadiimiga ah" ayaa ah in la arko halka suuqa u socdo, bilowga / dhamaadka soo noqoshada, halkaas oo aad ka furan karto ganacsiyo. Sawirka wuxuu muujinayaa kor u kac weyn, ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah oo ku saabsaan calaamadaha ka soo baxa khadka taageerada / iska caabinta .
2. Dhaqdhaqaaqa Celceliska (MA) .
Isgoysyadu waxay muujinayaan isbeddelka isbeddelka, fur ikhtiyaar ikhtiyaar ah shamaca xiga, oo ka bax marka calaamadda soo horjeedda ay soo muuqato ama dib u noqosho muuqata. Isbeddellada xooggan, waxaad intaa dheer ku soo geli kartaa dib-u-soo-celin ka timid Celceliska Dhaqdhaqaaqa , sida ku cad sawirka.
3. Alligator waxaa qoray Bill Williams .
Mid ka mid ah MA ma bixin karo calaamadda ganacsiga laba-geesoodka ah ee saxda ah, haddii kaliya sababtoo ah waa tilmaamaha farsamo ee ugu liita. Waxaad u baahan tahay celcelis ahaan celcelis dhaqdhaqaaq leh xilliyo kala duwan, oo badanaa loo yaqaan "dhakhso", "dhexdhexaad" iyo "gaabis". Bill Williams wuxuu ku guuleystey inuu helo iskudhaf si fiican uga shaqeeya inta badan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' waana mid la fahmi karo bilowga: hoos u dhaca, marka khadadka loo habeeyo sida soo socota (kor ilaa hoos): "Jaw" (buluug), "Ilkaha" (casaan), " Dibnaha "(Cagaar) Wixii soo kordha, xaaladdu waa ay rogtay. Ha furin marka khadadka isku dhafan - "Alligator wuu seexdaa".
Oscillators iyo kanaalada
Marka lagu daro shaandhaynta dib u dhigista MA, oscillators-ku waxay ku daraan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan xaaladda suuqa ee hadda - intee in le'eg ayay isu-dheellitirkeeddu u weecanayaa iibsadayaasha (dibiyada) ama iibiyaasha (bears).
Tilmaamayaasha kanaalka ayaa loo tixgelin karaa inay lamid yihiin khadadka isbeddelka; waxaa loo dhisaa si otomaatig ah iyadoo loo eegayo xuduudaha la cayimay, taas oo yareysa halista khaladaadka muuqaalka.
Jaantuska algorithm wuxuu tixgelinayaa aag ka hooseeya heerka 80 inuu yahay 'xad dhaaf' ka dib markaa hoos u dhacu waa inuu bilaabmaa, oo ka sarreeya heerka 20 sida 'oversold', oo ay ku xigto kor u kac. Meelaha laga soo galo waxay noqon doonaan bixitaanka shaxda 'Stochastic' ee aagaggan. Qiimaha aasaasiga ah waa 80/20, waad beddeli kartaa iyadoo kuxiran astaamaha hantida, isbeddellada sare, 70/30 ayaa lagula talinayaa. Sidan ganacsadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh ayaa ka saari kara suuq badan «buuq».
Oscillator kale oo caan ah oo u adeegsada histogaraam calaamadaha: meelaha ugu badan ee la isku halleyn karo waxay noqon doonaan isgoyska heerka eber ee ' MACD' xagga hoose ilaa CALL iyo xagga sare xagga BUY. Bixitaanka waxaa la sameeyaa bilowga leexashada dhinaca ka soo horjeedka.
3. Kooxaha Bollinger .
Tilmaame-yarihii ugu horreeyay ee muujiyay natiijooyin wanaagsan dhammaan hantida ganacsiga, gaar ahaan dhinacyada udhaxeeya 30-50 dhibcood. Isbeddellada xooggan, waxay ka bilaabantaa «raacidda» qiimaha u dhow soohdinta sare ama hoose. Xaaladda noocaas ah, way adag tahay in la go'aamiyo daqiiqadda bilowga soo noqoshada, waxaa lagu talinayaa in loo isticmaalo MA si loo xaqiijiyo dheeri ah calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ah!
Si aan loo tusin tilmaamayaasha, dhab ahaantii qiimaha marwalba wuxuu ka socdaa heer ilaa heer kale. Intooda badan waxaa sameeyay dadka suuqa sameeya, ka dibna waxay bilaabaan inay suuqa u riixaan jihada saxda ah. Way adag tahay in la aqoonsado daqiiqadda ciyaarta noocan oo kale ah, laakiin waa macquul waana helnaa dhibic aad u wanaagsan oo ikhtiyaar faa'iido leh leh.
1. Max max / min .
Heerarka in xitaa bilowgu aqoonsan karo oo furi karo ganacsi jabitaan / soo kabasho. Caqli-galnimada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah heerarka waa mid fudud: burburka ugu badnaan / min, gaar ahaan haddii ay tahay toddobaadle ama qiimayaal bille ah, waxay u badan tahay inuu macnaheedu yahay isbeddel ku yimaada isu-dheellitirka awoodda iibsadayaasha / iibiyeyaasha, bilowga cusub ama sii socoshada isbedelka socda. Bounces-ka taa beddelkeeda waxay muujinayaan in dagaalku wali socdo; sidoo kale lacag waad ku heli kartaa tan!
2. Heerarka dib-u-habeynta Fibonacci .
Tixraaca Fibonacci waxaa laga helaa habab badan oo dabiici ah; qof kastaa wuu ogyahay oo si tartiib tartiib ah ayuu u bilaabay adeegsiga ganacsiga. Ma hayaan sharaxaad kale oo aan ka aheyn cilmu-nafsiga «u sameynaya sida dadka kale». Xitaa haddii aad falanqeyso ururada amarrada sugaya ee kuwa sameeya suuqa, waxaad arki kartaa inay badanaa ku yaalliin khadadka shabakadda. Sidaa darteed, qodobbada furitaanka dushooda waa kuwo la isku halleyn karo oo la saadaalin karo.
3. Heerarka kale .
Waxaa jira xeelado badan oo qoraa ku saabsan sida loo xisaabiyo iyo heerarka ganacsiga. Tusaale ahaan, heerarka Murray ayaa la bixiyaa, iyo Pivot Point sidoo kale waa la sheegay, taas oo lagu go'aaminayo qiimaha furitaanka / xiritaanka ee maalintii hore.
Shumaca iyo qaababka farsamada
In kasta oo uu jiro cadaadiska ganacsiga-Joogtada sare (HFT), falanqaynta muuqaalka ah ee qaababku waxay sii wadaa inay keento faa'iido xasilan xitaa suuqa suuqyada loo yaqaan 'cryptocurrency', waa inay ku jirtaa gantaalada ganacsade kasta.
1. Falanqaynta Shumaca .
Jaantuska shamaca Japan iyo isku-darka ayaa ka weyn 200 sano jir, qaababku waxay sii wadaan inay ku shaqeeyaan macaash, gaar ahaan kuwa rogaal celinta. Sida kiiska Fibonacci, waxaa jira qayb nafsaani ah marka la shaqeynayo; ganacsatada badankood waxay wax ka barteen hal buug, inta lagu gudajiro helitaanka meelaha laga soo galo, badankood waxay u dhaqmaan si caadi ah. Qiimaha ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ee tan ka socda ma yaraanayo, laakiin, haddii ay dhacdo isbeddello, waad arki kartaa waxa dhab ahaan aan halkaa oolin. Raadi moodooyinka ugu adag sida «Doji» !
2. Waxqabadka Qiimaha .
Qorayaashu waxay ka hadlayaan «akhriska casriga ah iyo hagaajinta falanqaynta laambadda» in kastoo, marka laga reebo beddelka magacyada qaababka muhiimka ah, aan la arkin wax isbeddel ah oo kadin ah. Tusaale ahaan, «Pin-Bar» oo ka muuqda shaxanka waa uun shumac caadi ah «Hammer», iyo wixii la mid ah. Farsamadu waxay leedahay taageerayaal badan; waa qalad in aan la xusin iyada oo ah isha laga soo galo.
3. Qaababka farsamada .
Haddii labada nooc ee hore dareenka ugu weyn la siiyay falanqaynta suuqa xilligan xaadirka ah, taas oo dhab ahaantii lagu muujiyey isku-darka laambadda, markaa dhaqdhaqaaqa suuqa ayaa muhiim u ah halkan: sidee ku yaal max / min maxalliga ah (eeg tusaalaha), sida ay la xiriira xogta taariikhiga ah, calaamadda binary nool, iwm.
Qaababkani waxay ku habboon yihiin meheradaha muddada-dheer iyo muddada-dheer - muuqaalka barta laga soo galo waxay u baahan tahay qaab-dhismeedkooda oo buuxa, xitaa iyadoo laga weecinayo foomka aasaasiga ah. Waqtiga xaddidan illaa M30, tani waa wax aan macquul aheyn, ka ganacsiga moodooyinka aan dhammeystirnayn waxay u baahan yihiin khibrad dheer, laguma talinayo kuwa bilowga ah !
Haddii aad u fiirsato xayeysiinta ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah, waxaa jira faa'iidooyin qaar: deebaajiga ugu yar, mugga macaamil ka $ 1. Hal dhibic oo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa jihada la doonayo laga bilaabo heerka furitaanka ayaa ku filan faa'iido. Waxaas oo dhami waa run, laakiin markay bilaabayaashu bilaabaan ganacsi waxay la kulmaan dhicitaan ama waqtiga ay ikhtiyaarku furan yahay . Intaa kadib, heshiisku si otomaatig ah ayuu uxiran yahay - mararka qaar qiimuhu wuxuu udhaqaajiyaa dhanka saxda ah ilbiriqsiyo yar kadib, anaguna mar hore ayaan khasaaray.
Waqtiga xaddidan ayaa caqabad weyn ku ah ganacsiga guuleysta; awoodda si sax ah loo xisaabiyo dhicitaanku waxay ku timid khibrad, in kasta oo mabda'a aasaasiga ahi uu noqon karo in «taariikhda dhicitaanka ikhtiyaarka ahi ay ahaataa ugu yaraan 2-3 shumacyo SHAQAYNTA SHAQADA» . Tusaale: calaamaddu waa software laba-geesood ah oo calaamadeysan oo waqtiga M5 ah, dhicitaankiisu dhacayo 10-15 daqiiqo. Dhaqanka ganacsiga ayaa muujiyay qaababka soo socda:
Isku-darka dib-u-celinta shumacyada, dhibcaha kala-goynta khadadka qaab farsamo, dib-u-celinta ka timaadda taageerada / iska caabbinta waxaa lagu shaqeeyaa celcelis ahaan baararka 3-5;
Ka dib markaad jabiso heer qiimo leh, waxaa fiican in la kordhiyo qiimaha 7-10 baararka;
Xulashooyinka isbeddelka intraday ayaa noqon doona kuwa ugu dheer. Dib-u-soo-celin ayaa suurtagal ah, ka dib markaa dhaqdhaqaaqa la soo celiyo, markaa si aan suuqa uga bixin goor hore, gaar ahaan marka qadarka weyn ee macaamil ganacsi, dejiyo dhicitaanka 10-15 baararka.
Waxaan soo bandhignay farsamooyin aasaasi ah oo ku saabsan sida ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeynayo iyadoo la adeegsanayo falanqeyn farsamo si loo go'aamiyo qodobbada furitaanka xulashooyinka Waxaa lagu tijaabiyey jiilalka saamiyada iyo sarifka lacagaha qalaad. Waxay sidoo kale ku habboon yihiin cryptocurrencies, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad xilliyo kormeerto natiijooyinka, si sax ah ugu hagaajiso xaaladda hadda jirta.